Roborock S7: fanadiovana avo lenta ankehitriny miaraka amin'ny fikosehana ultrasonic | Vaovao momba ny gadget
Roborock S7: fanadiovana avo lenta ankehitriny miaraka amin'ny fikosehana ultrasonic
Miguel Hernandez | 18/04/2021 16:00 | General, hevitra
Ireo mpanadio «vacuum vacuum» dia nitombo ny habeny sy ny fahaizany rehefa mandeha ny fotoana, izay natomboka ho vokatra manana fahombiazana somary mampiahiahy, dia nanjary vokatra afaka nanamora ny fiainantsika, indrindra raha ny momba ilay marika. Roborock, manam-pahaizana manokana amin'ny robot avo lenta avo lenta.
Fantaro miaraka aminay inona avy ireo zava-baovao rehetra ary raha ny fahasamihafana misy eo amin'ireo mpanadio fako robot avo lenta dia mihoatra lavitra ny vidiny, ho mendrika tokoa ve izany?
Toy ny tamin'ny fotoana maro hafa, amin'ity indray mitoraka ity ihany koa nanapa-kevitra ny hampiditra horonantsary amin'ny famakafakana izahay, izahay ihany no nanapa-kevitra ny hamorona horonantsary "manokana" izay hahafahanao mahita bebe kokoa noho ny famerenana tsotsotra, dia hanana antsipirihany sy fampahalalana marina momba ny fikirakirana ny fitaovana ianao sy maro hafa. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy milalao ilay horonan-tsary fotsiny ianao amin'izay hahitanao ny fampahalalana rehetra izay tsy hain'ny tenanao novolavolaina irery. Araraoty ny fahafahanao misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube misy anay ahitanao atiny marobe ary manampy anay hitombo hatrany.
1 Volavola: Marika an-trano
2 Famaritana ara-teknika: Tsy misy tsy ampy
3 Ny fampiharana Roborock, sanda fanampiny
4 Fomba fanadiovana sy fikosehana samy hafa
5 Fikojakojana sy fizakan-tena
Volavola: Marika an-trano
Roborock dia manohy miloka amin'ny zavatra mety. Mahafantatra mora ny volavolany ary nahazoany fahafaham-po be teo amin'ireo mpampiasa azy. ary mazava ho azy ny varotra maro. Misy fanontana maro miaraka amina endrika mitovy aminy, miaraka amin'ilay mpanala afovoany eo an-tampony, fitaovana boribory sy lava be miaraka amina alokaloka roa hisafidianana, fotsy na mainty. Mazava ho azy, toy ny mahazatra fa miloka amin'ny plastika isika, bokotra fikirakirana telo eo afovoany voalohany ary LED mifandraika izay manova ny volony araka ny fiasa aseho.
Dimensions: 35,3 * 35 * 9,65 sm
lanja: 4,7 Kg
Manana ny fonony aoriana izahay izay rehefa manainga dia mampiseho antsika ny tanky mafy sy ny mari-pamantarana WiFi. Eo amin'ny farany ambany dia manana ny roller fingotra afovoany isika, ny mpitrandraka azy, ny kodiarana jamba ary ny "collector" tokana, tamin'ity indray mitoraka ity dia vita amin'ny silicone. Ny fitoeran-drano sy ny fanitsiana ny fonosana dia mijanona ao aoriana. Volavola mitovy amin'ilay hita hatreto, eny, ny kalitaon'ny fanitsiana sy ny lIreo fitaovana, izay mahatonga antsika hahatsapa fa haingana fa mifampiraharaha amina vokatra somary premium izahay. Tsy hitantsika ao amin'ny packagin, eny, izay karazana fanoloana ireo kojakoja fanadiovana.
Famaritana ara-teknika: Tsy misy tsy ampy
Mandeha mivantana amin'ny herin'ny suction izahay, iray amin'ireo fizarana farany azo atao raha ny amin'ny fanavahana ny karazana fitaovana ity. Tsy misy hafa noho Paska 2.500 izay hahatonga antsika hahatsapa haingana fa ity Roborock S7 ity dia ho afaka amin'ny loto isan-karazany. Raha te hitahiry izay angoninao dia manana mililitera 470 mililitatra izy io esorina avy any ambony izy io ary manana a Sivana HEPA azo soloina raha ilaina.
Manana fifandraisana WiFi izahay hitantana ny rindranasao, mifanaraka tanteraka amin'ny Alexa, Siri, ary Google Assistant. Raha miresaka momba ny fikosehana ultrasonic isika izao dia mifantoka amin'ny zava-misy fa manana tahiry 300 mililiter "fotsiny" isika, izay horesahintsika manaraka. Zava-dehibe ny milaza fa tsy hifanaraka amin'ireo tamba-jotra WiFi 2,4GHz fotsiny izy io mba hanitarana ny elanelan'ny asa.
Manana toby fiampangana tsotra sy mahazatra ho an'ny marika izahay, miaraka amin'ny tarehimarika LED LED ary tariby mifandraika amin'ny herinaratra namboarina. Mazava ho azy, farafaharatsiny ny transformer dia tafiditra ao anaty fotony izay manome fahombiazana mahomby amin'ny resaka fanjifana.
Ny fampiharana Roborock, sanda fanampiny
Ny rindrambaiko dia ampahany manandanja indrindra. Tsotra be ny fikirakirana voalohany:
Ampidino ny fampiharana (iOS / Android)
Alefaso ny Roboorock S7
Tsindrio ny bokotra roa amin'ny Roborock S7 mandra-pahatapaky ny WiFi LED (any amin'izay misy ny tanky solid)
Mikaroha avy amin'ny fampiharana
Ampidiro ny teny miafin'ny tambajotra WiFi
Hanamboatra azy ho azy
Tsotra toy izany ny fananganana ny Roborock S7. Ao amin'ny lahatsarinay dia ho hitanao ireo toe-javatra samihafa ary koa ny mety hanovana ny fiteny, hanoratanao fotoana amin'ny fanadiovana ary maro hafa. Na izany aza, tsara ny manamarika fa ny fampiharana izany dia ahafahantsika mitantana ny sarintany ao an-tranontsika, manitsy ambaratonga herinaratra tsy misy fangarony telo, hery fanosotra telo hafa ary manitsy ireo faritra izay tadiavinay hodiovina aza.
Fomba fanadiovana sy fikosehana samy hafa
Manomboka amin'ny hetahetam-po isika, ny maody izay hampiasainay indrindra ary mampiasa ireo sensor LiDAR samihafa hanararaotana ny fahombiazana:
Mode mangina: Fomba fanjifana ambany izay mitondra ny fitaovana hanakaiky ny fahaleovan-tena adiny telo.
Mode mahazatra: Fomba iray ahafahan'ny fitaovana manitsy ny herin'ny suction avy hatrany mifototra amin'ny fahitana ny loto sy ny karipetra.
Mode Turbo: Zavatra matanjaka sy mitabataba kokoa, atolotra indrindra rehefa misy loto sy fako lehibe kokoa.
Mode mavesatra indrindra: Mampiasa herinaratra 2.500 Pa izy, mitabataba be ary hilaza izahay fa na manelingelina aza, eny, tsy hisy ny loto manohitra.
Mikasika ny fihetsiky ny Roborock S7 miaraka amin'ny karipetra Afaka manamboatra safidy telo samihafa isika: Sorohy izany; Famonoana sy famonoana fikosehana; Ampitomboy ny hery suction rehefa hitanao. Miloka foana amin'ny kinova farany aho ary niavaka ny fampisehoana.
Safidy maro ihany koa ho an'ny fikosehana ultrasonic izay nanaitra anay tsara tamin'ny fomba fahombiazany. Be dia be ny fahazoan-dalànay azy na dia ho an'ny gorodona na gorodona hazo aza, zavatra iray izay mety hitera-doza amin'ny fitaovana mitovy amin'izany mandraka ankehitriny. Hihorohoro miaraka amin'ny matetika hatramin'ny 3000 heny isan-minitra. Izany rehetra izany dia lavitra ny fikikisana tanana amin'ny resaka gorodona vita amin'ny seramika, fa raha ny fahitako azy dia ampy ho an'ny fikolokoloana andavanandro io, eny, hadinoy ny fanosehana loto maloto.
Manana doka izy ioReservoir 300 milliliter izay tianay hampahatsiahivana anao, tsy azonao atao ny mampiditra vokatra fanadiovana, ny marika mihitsy dia manondro fa mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny tanjaky ny vokatra izany.
Fikojakojana sy fizakan-tena
Araka ny fantatrao tsara, ity fitaovana ity dia misy tondro fikojakojana amin'ny fampiharana azy. Noho izany dia tsy maintsy raisintsika an-tsaina izany Azo soloina ny sivana HEPA ary mila manolo ny ankamaroan'ny zavatra azo ampiasaina ao anatin'ny enim-bolana eo ho eo isika. Toy izany koa, hatao fandaharana ireo fanadiovana ka:
Borosy lehibe: isan-kerinandro
Borosy sisiny: Isam-bolana
Sivana HEPA: Isaky ny tapa-bolana
Mikosoka lamba: Isaky ny ampiasaina tsirairay
Fifandraisana sy sensor: Isam-bolana
Mikasika ny fizakan-tena, Izy io dia hiovaova eo anelanelan'ny 80 minitra sy 180 minitra, arakaraka ny isan'ny fiasa, izany dia hanampy amin'ny fametahana ny 5.200 mAh avy amin'ny baterinao hatramin'ny farany ambony.
Mazava ho azy fa ity Roborock S7 ity dia manatanteraka saika ny zava-drehetra nampanantenaina, zavatra azo antenaina amin'ny vokatra 549 (AliExpress). Ny fanosorana dia mbola lavitra ny fikolokoloana nentim-paharazana amin'ny nofinofy seramika, na izany aza, ny famafana sy ny fahombiazany miaraka amina fampiharana tena sarotra dia manampy be dia be ho lasa iray amin'ireo mpanadio banga robot izay manome fahafaham-po bebe kokoa noho ny aretin'andoha. Mazava ho azy fa tsy miatrika vokatra ambaratonga fidirana isika, noho izany ny fahazoana azy dia mitaky fandanjana ny filantsika.
Navoaka tamin'ny: 18 Aprily 2021
Fanovana farany: 17 Aprily 2021
Fampiharana tsara sy feno
Hery avo suction sy fahombiazan'ny fanadiovana
Fanosehana ampy ho an'ny fikojakojana ny paleta
Fahaleovan-tena ampy ho an'ny trano misy ny 90 m2 Aprx.
Tsy mampiditra izay azo ampiasaina ao anaty fonosana
Indraindray dia tsy mamaky banga ety izy io
Feo mafy be any amin'ny fahefana matanjaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Roborock S7: fanadiovana avo lenta ankehitriny miaraka amin'ny fikosehana ultrasonic
Samsung Odyssey G7: mpanara-maso lalao iray tena feno
Ny lalao chess tsara indrindra ho an'ny PC